Umbuzo: Awukho umsindo ophuma ngemva kokuthi i-microphone ye-2.4G ixhunyiwe, futhi umsindo wekhompyutha uvamile
Impendulo: 2.4 Imakrofoni ithulisiwe, cindezela "Imenyu" ukuze ukhulule isimungulu, umsebenzi ujwayelekile.
Umbuzo: Idivayisi ye-USB ayikwazi ukubonakala
Impendulo: Uma ikhebula le-USB lingaxhunywanga, lixega noma liyawa, lixhume futhi; uma ibhodi le-USB-HUB livaliwe noma lilimele, lishintshe bese ulixhuma futhi; uma izikhonkwane zesixhumi esibonakalayo se-USB zonakalisiwe, buyisela lonke ibhodi lesixhumi esibonakalayo ngokuqondile
Umbuzo: Idivayisi ye-USB ayikwazi ukusetshenziswa
Impendulo: 1. Qinisekisa ukuthi umshayeli wedivayisi ye-USB ufakiwe, faka kabusha umshayeli noma xhuma idivayisi ye-USB kwezinye izivivinyo, futhi uqinisekise; uma kungenjalo, buyisela i-USB-HUB. Kuya
2. Qinisekisa ukuthi i-USB-HUB kanye namadivayisi e-USB ajwayelekile noma awatholakali, bese ubuyisela isistimu.
Q: Awukho umsindo ophuma ku-VGA noma okukhipha i-HDMI
Impendulo: Hlola ukuthi uxhumo nedivayisi yangaphandle lulungile yini
Umbuzo: Ayikho impendulo lapho ucindezela inkinobho yamandla, isibani asikhanyi, futhi lonke uhlelo aluvulwa.
Impendulo: 1. Hlola ukuthi ulayini wokufaka amandla uxhumeke kahle yini, noma iswishi yesokhethi yamandla ivuliwe, futhi uqinisekise ukuthi intambo yamandla inamandla.
2. Vula ikhava ephezulu yomshini, hlola ukuthi ikhebula lokuthinta lixhumeke ngokukhululekile yini, bese usebenzisa igiya le-DC ku-multimeter ukuze ulinganise i-"5V, GND" kuphaneli yokuthinta ukuze ubone ukuthi kukhona yini ugesi we-5V. Uma ukunikezwa kwamandla okungu-5V kungavuli, buyisela iphaneli yokuthinta ; Uma ingekho i-5V, buyisela ugesi.
3. Uma amandla e-plug-in eshintshwa, kodwa namanje angeke avulwe, buyisela ibhodi elikhulu lesilawuli esihlakaniphile.
Q: Kukhona imigqa eqondile noma imithende ngemuva
Impendulo: 1. Khetha ukulungisa okuzenzakalelayo kumenyu;
2. Lungisa iwashi nesigaba kumenyu
Umbuzo: Ukuma kokuthinta okungalungile
Impendulo: 1. Sebenzisa uhlelo lokubeka indawo ukuze uhlole ukuthi luxhumekile yini;
2. Hlola ukuthi uhlelo lokuzilinganisa lwe-WIN lusetshenziselwa ukulinganisa, uma kunesidingo, lucacile; sebenzisa uhlelo olukhethekile ukuze uthole; 3. Hlola ukuthi ipeni lokuthinta libheke esibukweni
Q: Umsebenzi wokuthinta awusebenzi
Impendulo: 1. Hlola ukuthi umshayeli wokuthinta ufakiwe futhi ucushiwe kukhompyutha yokusingatha; 2. Hlola ukuthi usayizi wento ethintwayo uyalingana yini nomunwe; 3. Hlola ukuthi ikhebula le-USB lesikrini sokuthinta lixhumeke ngendlela efanele yini; 4. Hlola ukuthi ikhebula lesikrini sokuthinta lide kakhulu yini. Ukunciphisa ukudluliswa kwesignali
Q: Ikhompyutha ayivuli
Impendulo: Isilawuli esimaphakathi sivulwa ngokujwayelekile, hlola ukuthi intambo yamandla ixega noma iyawa, ukuthi intambo yamandla ekhompyutha ixhumeke kahle yini, bese uxhuma futhi intambo yamandla ekhompyutha.
Q: Ikhompyutha iqala kabusha ngokuphindaphindiwe
Impendulo: Phinda ufake imojula yememori, khipha i-motherboard, khipha ibhethri yenkinobho, nciphisa izigxobo ezinhle nezingezinhle ebhodini lomama ngensimbi imizuzwana engu-3-5, uyixhume kabusha, futhi uyifake futhi uyiqalise; emva kwendlela engenhla, kuyadingeka ukuqala kabusha ngokuphindaphindiwe. Cabanga ngebhodi lomama lekhompuyutha kanye nezinkinga zokuphakelwa kwamandla ekhompyutha.
Umbuzo: Isignali yomyalo ayikho ebangeni kumodi yekhompyutha
Impendulo: 1. Hlola ukuthi isibonisi simiswe ngendlela efanele yini; 2. Hlola ukuthi isixazululo siyisinqumo esingcono kakhulu; 3. Lungisa ukuvumelanisa komugqa kanye nokuvumelanisa kwenkundla kumenyu
Umbuzo: Ikhompyutha ayikwazi ukuqaliswa, ilambu lamandla ekhompyutha livaliwe noma alijwayelekile
Impendulo: Faka esikhundleni ngqo ikhompuyutha ye-OPS ukuze uyihlole. Uma isahluleka ukuqalisa, buyisela amandla e-plug-in kanye nendiza engemuva yokulawula emaphakathi.
Umbuzo: Isistimu yekhompyutha ayikwazi ukubonisa noma ukuqala ngokujwayelekile
Impendulo: 1. Lapho uqala ideskithophu, ikhuthaza "ukwenza kusebenze uhlelo", futhi ingena kudeskithophu ngesikrini esimnyama. Kulokhu, inguqulo efakwe ngaphambili yesistimu yokusebenza iphelelwe yisikhathi, futhi ikhasimende livula uhlelo ngokwalo; 2. Ngemva kokuqalisa imodi yokulungisa, iyavela futhi ayikwazi ukulungiswa. Qalisa kabusha bese ucindezela ikhibhodi "↑↓", khetha "ukuqalisa okuvamile", inkinga iyaxazululwa; umsebenzisi kufanele avale kahle bese ucindezela inkinobho ethi "Del" ukuze ufake i-BIOS, shintsha imodi ye-hard disk, shintsha isuka ku-"IDE" iye ku-"ACHI" mode noma isuke ku-"ACHI" iye ku-"IDE" 4. Uhlelo namanje alukwazi...
Umbuzo: Umshini awukwazi ukuxhuma ku-inthanethi, imbobo yenethiwekhi ibonisa u-"X" noma ikhasi lewebhu alikwazi ukuvulwa
Impendulo: (1) Qinisekisa ukuthi inethiwekhi yangaphandle ixhunyiwe nokuthi ungakwazi yini ukusebenzisa i-inthanethi, njengokusebenzisa ikhompuyutha ephathekayo ukuze uhlole (2) Hlola ukuthi umshayeli wekhadi lenethiwekhi ufakiwe yini kumphathi wedivayisi (3) Hlola izilungiselelo zenethiwekhi ukuze bheka ukuthi ilungile yini (4) Qinisekisa ukuthi isiphequluli silungile yini, alikho igciwane, ungalilungisa ngamathuluzi esoftware, uhlole futhi ubulale igciwane (5) Buyisela uhlelo, faka kabusha umshayeli ukuxazulula le nkinga (6) ) Faka esikhundleni i-motherboard yekhompyutha ye-OPS
Umbuzo: Umshini usebenza kancane, ikhompuyutha ibambekile, futhi nesofthiwe yebhodi elimhlophe ayikwazi ukufakwa.
Impendulo: Kukhona igciwane emshinini, udinga ukubulala igciwane noma ukubuyisela uhlelo, futhi wenze umsebenzi omuhle wokuvikela ukubuyiselwa kwesistimu.
Q: Idivayisi ayikwazi ukuvulwa
Impendulo: 1. Bheka ukuthi ugesi ukhona yini; 2. Hlola ukuthi iswishi yedivayisi ivuliwe yini nokuthi inkomba yokushintsha amandla ibomvu yini; 3. Hlola ukuthi inkomba yesistimu ibomvu noma iluhlaza, nokuthi imodi yokonga amandla ivuliwe yini.
Umbuzo: Uhlelo lwevidiyo alunasithombe futhi alunamsindo
Impendulo: 1. Bheka ukuthi umshini uvuliwe yini; 2. Hlola ukuthi ulayini wesiginali uxhumekile yini nokuthi umthombo wesignali uyahambisana yini; 3. Uma ikwimodi yekhompyutha yangaphakathi, hlola ukuthi ikhompuyutha yangaphakathi ivuliwe yini
Umbuzo: Umsebenzi wevidiyo awunawo umbala, umbala obuthakathaka noma isithombe esibuthakathaka
Impendulo: 1. Lungisa i-chroma, ukukhanya noma ukugqama kumenyu; 2. Hlola ukuthi ulayini wesiginali uxhumeke kahle yini
Umbuzo: Umsebenzi wevidiyo unemigqa evundlile noma eqondile noma i-jitter yesithombe
Impendulo: 1. Hlola ukuthi ulayini wesiginali uxhumeke kahle yini; 2. Hlola ukuthi ingabe ezinye izinto zikagesi noma amathuluzi kagesi abekwe eduze komshini
Umbuzo: Iprojektha ayinakho isibonisi sesignali
Impendulo: 1. Hlola ukuthi iziphetho ezimbili zekhebula le-VGA zikhululekile yini, ukuthi izintambo zeprojektha zilungile yini, futhi indawo yokugcina okokufaka kufanele ixhunywe; ukuthi ngabe isiteshi sesignali siyahambisana yini nesiteshi sezintambo; iphaneli yokulawula emaphakathi ikhetha isiteshi "se-PC". 2. Sebenzisa imonitha enhle ukuxhuma ngqo embobeni ye-VGA yekhompyutha ye-OPS ukuze ubone ukuthi kukhona okukhipha isignali. Uma ingekho isignali, buyisela ikhompuyutha ye-OPS. Uma kukhona isignali, faka isistimu ngokuchofoza kwesokudla "Properties" futhi ubonise ukuze ubone ukuthi ingabe amamonitha amabili atholakele. Kumamonitha akabili, buyisela ibhodi lomama elimaphakathi noma indiza engemuva yokulawula emaphakathi; uma kunemonitha eyodwa kuphela, buyisela ikhompuyutha ye-OPS.
Umbuzo: Isiginali yokubonisa iprojektha ayijwayelekile
Impendulo: 1. Isikrini asivezwa ngokuphelele, izithonjana zedeskithophu azivezwanga noma azilungiswanga ngokugcwele ukuze kube nesinqumo esifanele noma uhlelo luyabuyiselwa (uma ikhompuyutha iqala, cindezela ukhiye "K" ukuze ukhethe uhlelo lokubuyisela) 2. Isikrini sinombala ohlukile noma isikrini simnyama. Bheka ukuthi ingabe ikhebula le-VGA liqinile, lixhumeke kahle, futhi umsebenzi weprojektha ujwayelekile; uma ikhebula le-VGA kanye neprojektha kujwayelekile, xhuma ngqo kusixhumi esibonakalayo se-VGA sekhompyutha ye-OPS. Uma isibonisi sijwayelekile, buyisela i-backplane yokulawula emaphakathi kanye nebhodi lomama; uma kungejwayelekile, buyisela ikhompuyutha ye-OPS.
Q: Isithombe asinawo umbala futhi umbala akulungile
Impendulo: 1. Hlola ukuthi izintambo ze-VGA ne-HDMI azixhunyiwe kahle yini noma zinezinkinga zekhwalithi; 2. Lungisa i-chroma, ukukhanya noma ukugqama kumenyu
Q: Bonisa ifomethi engasekelwe
Impendulo: 1. Khetha ukulungisa okuzenzakalelayo kumenyu; 2. Lungisa iwashi nesigaba kumenyu
Umbuzo: Isilawuli kude siyehluleka
Impendulo: 1. Hlola ukuthi akukho yini ukuphazamiseka phakathi kwesilawuli kude nesilawuli kude se-TV sokwamukela ukuphela; 2. Hlola ukuthi i-polarity yebhethri kusilawuli kude ilungile yini; 3. Hlola ukuthi isilawuli kude siyadinga yini ukuvala ibhethri
Umbuzo: Iswishi yokhiye owodwa ayikwazi ukulawula iprojektha
Impendulo: (1) Ikhasimende alikayibhali ikhodi yokulawula yeprojektha engu-RS232 noma ikhodi ye-infrared, futhi labeka isibani se-infrared endaweni lapho uphenyo lwe-infrared lweprojektha lungatholwa khona. Bhala ikhodi bese uhlola ukuthi ulayini wokulawula uxhumeke kahle yini. (2) Ngemuva kokusetha amapharamitha ayisisekelo, isenzo sokulawula esimaphakathi somshini kufanele sikhethwe, simakwe ngokuthi "√", bese ubhala amapharamitha ayisisekelo. (3) Setha isikhathi sokuthumela ikhodi, isikhathi sokulibaziseka, nesikhathi sokucisha isikhiya sikagesi.
Umbuzo: Isipika somsebenzi womsindo sinomsindo owodwa kuphela
Impendulo: 1. Lungisa ibhalansi yomsindo kumenyu; 2. Hlola ukuthi isiteshi esisodwa kuphela esisethwe kuphaneli yokulawula umsindo yekhompyutha; 3. Hlola ukuthi ikhebuli yomsindo ixhumeke kahle yini
Umbuzo: Umsebenzi womsindo unezithombe kodwa awukho umsindo
Impendulo: A: 1. Hlola ukuthi inkinobho yokuthulisa icindezelwe yini; 2. Cindezela ivolumu +/- ukuze ulungise ivolumu; 3. Hlola ukuthi ikhebula lomsindo lixhumeke ngendlela efanele yini; 4. Hlola ukuthi ifomethi yomsindo ilungile yini